Ny finoanoam-poana dia finona tsy araka ny lalàn ny saina izay miorina amin ny tahotra na ny tsy fahalalana izay iheverana ho manana toetra mihoatra ny an ny zavaboary na toetra masina ny zava-mitranga na ny fihetsika na ny fitenenana sasany. Tamin ny taonjato faha-16 ny finoanoam-poana dia ilazana ny finoan ny mpivavaka amin ny sary mpanompo sampy, ny fivavahana amin ny andrimani-tsy izy. Tamin ny taonjato faha-18 dia nilazana ny fivavahana rehetra sy ny fitsarana mialoha tsy misy fanadihadiana izany ka nampifanoherina amin ny saina. Arakaraka ny hevitr ilay teny dia mety hahafaoka ny fan ...
Ny fanambaràna dia fahalalana azo mivantana amin Andriamanitra ka mety ho amin ny alalanny fisehoan Andriamanitra izany na ny fahenoana ny teny mivoaka avy ao aminy na ny tsindrimandry azonny mpaminany na ny fanomezany lahateny efa voasoratra rahateo avy any aminy na fisehoan-javatra tsy fahita eo amin ny zavaboary. Atao hoe fivavahana vokatry ny fanambaràn Andriamanitra ny jodaisma sy ny kristianisma ary ny finoana silamo nefa tsy ireo fivavanana telo ireo ihany no mahalala ny atao hoe "fanambaràna". Misy ny atao hoe fanambaràna ankapobeny, izay fahalalana an Andriamanitra ampitain ny zav ...
Ny fizaràn-taona dia fari-potoana ao anatin ny taona izay ahatsapana tsy fiovana firy eo amin ny toetrandro izay mifandray amin ny tsingerim-piainan ny zavaboary. Ampifadraisin ny olona amin ny asa fivelomany koa ny fizaran-taona, indrindra ny fambolena sy ny fiompiana. Tsy mitovy ny isan ny fizaràn-taona arakaraka ny toetany na ny firenena na ny kolontsain ny mponina ka ao ny mizara ny taona ho roa toetany trôpikaly: asara sy asotry, ny mizara azy ho telo, ny mizara azy ho efatra ary ny mizara azy ho enina fizaràn-taona indiana, sns.
I Origenesy avy any Aleksandria dia teolojiana kristiana taminny Andro Taloha. Atao hoe Adamantiosy koa izy. Tao Aleksandria taminny taona 185 no nahaterahany. Notezaina taminny fivavahana kristiana izy. Saika maty matira izy taminny hafanam-pony raha novonoina ny rainy Leonidesy taminny 202 noho ny fanenjehana. Izy no rainny fanaovana heviteny aminny Baiboly. Atao hoe Ὠριγένης / Ôrigénês izy aminny teny grika. Isanireo atao hoe "Rainny Fiangonana" na "Abanny Eglizy" izy. Aminny ankapobeny dia tsy noraisinny Fiangonana ny fampianarani Origenesy izay mitory ny fisianny fanahinolombelona tal ...
Ny fanekem-pihavanana dia fanekena ifanaovanAndriamanitra sy ny vahoakany na aminny olombelona rehetra. Ao aminireo fivavahana abrahamika no tena ahitana izany, ka iresahana indrindra ny fanekem-pihavanana tamini Abrahama. Aminny teny hebreo dia atao hoe ברית / berith ny fanekem-pihavanana. Aminny teny grika kosa dia διαθήκη / diathêkê fa aminny teny latina dia foedus na pactum na conventum.
Ny famoronana na fahariana dia fedràm-piandohana itantarana ny fiandohan izao rehetra izao: ny olombelona, ny tany, ny aina ary izao tontolo izao. Na dia misy zavatra itovizany ny fedrà sasany momba ny famoronana na ny fiandohana dia betsaka ny antsipiriany tsy mitovy arakaraka ny fivavahana na ny vahoaka tompon ilay fedrà na fitantarana.
masoandro na tsia, sns izay mifandray amin ny tsingerim - piainan ny zavaboary fitsirin ny zavamaniry, fiovan - toetran ny biby, sns Ampifadraisin
Andriamanitra izay manerana izao rehetra izao sy ny maha tompon ny Tantara sy ny Zavaboary an Andriamanitra koa io boky io. Ambaran ny Bokin i Isaia manontolo
fanahin olombelona talohan ny hahaterahan ny vatany, ny hihavanan ny zavaboary rehetra mety isan izany koa ny devoly demony araka ilay atao hoe ἀποκατάστασις
atao hoe Ntaolo iraniana, dia nivavaka tamin ny zava - misy eo amin ny zavaboary toy ny masoandro sy ny hazavan ny masoandro ary ny varatra, nefa afaka
Ny demony araka ny finoan ny fivavahana maro, dia zavaboary tsy hita maso manana hery ratsy mahatonga ny fahaverezan ny olombelona entiny hanao ny ratsy
mpikaroka dia mihevitra fa avy amin ny tahotra sy ny fanajana ny herin ny zavaboary no niavian ny fivavahana amin andriamanitra maro izay nikendrena ny
mpiambina ny olona tsirairay ary ny anjely mibaiko ny zava - miseho eo amin ny zavaboary I Henoka na Enoka no olona voalohany nampianarin ny anjely manoratra
mahefa ny zava - drehetra sy mahalala ny zava - drehetra ary mihoatra ny zavaboary noforoniny izy. Izy no tompon izao rehetra izao sy ny hoavy, mpitsara
aminy. Ny olombelona na ny zanak i Adama no omem - boninahitra amin ny zavaboary rehetra eto an - tany, nefa izany fisondrotam - boninahitra izany dia miteraka